1 Karazana # 1: Litapallettur rafall
1.3 Adobe litur
1.4 Aðrir valkostir
2 Sokajy # 3: Generator fyrir skjámynd vefsíðna
2.2 Peeker síðu
2.3 Handtaka alla síðu
3 Sokajy # 5: Vefur bakgrunnur rafall
3.5 Áferð 4 Photoshop
3.6 GR Sites hnappagjafari
4.1 Form Logix
4.2 PHP form
Raha mitady fomba haingana kokoa ny asanao ianao ary mandefa fotoana sy hery bebe kokoa hevitra momba ny votoaty vaovao ary -barotra paikady, Mino aho fa ny lisitra dia tsy maintsy-tsoratadidy. Araka ny fijeriko farany WordPress.com tölfræði, með XmUMX tapitrisa ny blaogy navoaka isam-bolana.
Iza no manam-potoana hamoronana ny zava-drehetra amin’ny klóra og androany?
Karazana # 1: Litapallettur rafall
Aðgerðir / smáatriði:
Mba hamoronana litatöflur miloko miorina eo amin’ny sary.
Adobe Color dia fampiharana miorina amin’ny rahona hamolavolana lohahevitra amin’ny alalan’ny iPhone og nýjan leiðsöguaðila. Ny fitaovana dia manampy ny fanangonana loko avy amin’ny sary sokitra, zaridaina, na aiza na aiza misy anao ary mamorona ny volonao manokana. Azonao atao koa ny manaisotra ny loko amin’ny sary ary mampifanaraka ireo lohahevitra ireo ao amin’ny Adobe Illustrator CC.
Ný fitaovana loko hafa tsy dia tsara loatra dia Color Hunter, Color Lovers, CSS Drive Colette Palette Generator, ary koa Colllor. Stuðlar n ‘Endar Mismunur Bebe Kókó Aza ireo Fitaovana ireo (mamorona litatöflu Miloko Miorina Amin’ny Sary Fampidiran-Tsary) frá sjálfvirkt mynda ny code couleur Dia Mety hafa engho ny fahasamihafana amin’ny algrím fampirimana loko. Manoro hevitra anao aho mba hanandrana ny tsirairay, fara fahakeliny.
Sokajy # 3: Generator fyrir skjámynd vefsíðna
Mba hamoronana haingana skjámyndir amin’ny tranonkala ho an’ny fanaraha-maso na tanjona votoaty.
Mba hamoronana smámynd ny tranonkala iray mafana.
Izaho manokana dia mahita Skreppa saman á vefnum no fitaovana fakana sary an-tserasera farany. Izy io dia haingana, avo lenta, mora ampiasaina amin’ny mpampiasa, ary tena zava-dehibe fa mamorona sary tsy misy dikanteny amin’ny rano.
Handtaka alla síðu
Er móttækilegur aho dia tsy mpamokatra fakana sary? Na izany aza, fitaovana iray tsy tokony ho lanonana izany – Manara-maso ny fandraisana andraikitra amin’ny tranokala rehetra miaraka amin’ny kitay tokana. Fotoam-panam-potoana lehibe ho an’ireo izay mamolavola lohahevitra mamaly izany.
Valkostir: Favicomatic, Gen Favicon, Favicon rafall, InMotion Favicon rafall, ary koa Faviconr.
Sokajy # 5: Vefur bakgrunnur rafall
Tartan Maker – Sary ao amin’ny tartan stíll
Colorzilla – Mamolavola dingana miandalana ao amin’ny CSS kóða.
Áferð 4 Photoshop
Áferð 4 Photoshop dia mamorona lahatsoratra amin’ny endritsoratra manokana.
GR Sites hnappagjafari
GR Síður – mamorona bokotra amin’ny endri-tsoratra sy ny loko.
Valkostir: Ég elska IMG, DIY LOL, Manaova Meme ary IMG Flip.
PHP eyðublað – Mamorona endrika HTML til að gera 3 einföld skref, tsy mila sonia.